Iimidlalo ezi-5 ezilungileyo ze-ninja ze-Android | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Iimidlalo ezi-5 ezilungileyo ze-ninja ze-Android
UAron Rivas | 22/05/2021 08:00 | Izixhobo ze-Android, Imidlalo ye-Android
KwiVenkile yokudlala sinokufumana inani elingenakucingelwa leapps, izixhobo kwaye, ukuzonwabisa kunye nokuziphazamisa, imidlalo yazo zonke iintlobo. Ngethamsanqa, xa kufikwa kwimidlalo, kukho amawaka eqela ngalinye, ngalinye libhetele kunelinye kwaye linemizobo enomdla, izandi kunye namabali oza kuwafumana. Ewe kunjalo, njengoko bekulindelwe, kukho imixholo yomdlalo edla ngokubanomdla kunabanye, kwaye i-ninja yenye yezona zinto ziphumelele evenkileni, ke inemidlalo emininzi ekhutshelweyo neyadlalwayo kwi-Android.
Ngokuchanekileyo kweso sizathu kukuba sikulethela le post yokudibanisa, enye oya kuyifumana Iimidlalo ezi-5 eziphambili ze-ninja ze-Android ezikhoyo namhlanje kwiGoogle Play Store, ukuze wenze imfazwe ngalo mathuba okukruquka kunye nokucaphuka ngendlela eyonwabisayo.
Apha ngezantsi uyakufumana uluhlu lwe the 5 best ninja games for Android. Ngaphambi kokuya kuyo, kufanelekile ukuba uqaphele ukuba zonke ezo uza kuthi uzibone apha ngezantsi zikhululekile, ke akukho mfuneko yokuba uhlawule naluphi na uhlobo. Nangona kunjalo, enye okanye ezingaphezulu zinokuba nenkqubo yentlawulo encinci encinci yokufumana izibonelelo ezongezelelekileyo ngaphakathi kubo, kodwa oko kunokuba sele kuyinto ekhethiweyo. Ngoku, masihambe!
1 Umkhosi weninja: ilivo lemidlalo ye-adventure
2 I-Ninja Turtles: Iintsomi
3 I-Ninja Dash Run-Imidlalo emitsha ka-2021
4 Inkolelo kaNinja: Umdlalo wokudubula we-3D Sniper
Umkhosi weninja: ilivo lemidlalo ye-adventure
Ukuba ufuna ukuntywilisela kwihlabathi le-ninja, Iqhawe le-Ninja yenye yeyona midlalo ilungileyo onokuyikhuphela. Kwaye kukuthi, ukuqala, esi sihloko sinamazwe amaninzi kunye namanqanaba athi, njengoko kulindelekile, anyuke kubunzima kwinjongo nganye egqithileyo.
Jongana neentshaba zomdlalo ngezixhobo ezininzi, ii-combos kunye namaqhinga, kodwa ngaphandle kokuba ubhaqe imigibe eyahlukeneyo kunye neendawo zokufihla apho ngaphezulu kwesinye sokungena kungonakalisa umdlalo wakho. Kuya kufuneka woyise neminye imiqobo kumdlalo, eyongezwa kuluhlu lonke ixesha kwaye kunzima ukoyisa. Ingqele inokuba lolona tshaba lwakho lubi, kunye neembumbulu kunye nemipu, imigibe eyimfihlo, ukuqhekeka komhlaba, indawo ezinameva kunye nezinto, uyeke ukubala. Kuya kufuneka uthembele kwizakhono zakho njenge-ninja ukuba ungawi kwaye ufe ngokulula.
Qokelela imivuzo kunye neengqekembe eziza kukunceda kamva kwaye ziya kusetyenziselwa ukuthenga izinto ezithile kunye nokuphucula. Unokuphinda uvuselele ngalo lonke ixesha usifa kunye neengqekembe, njalo ke uhlala kwindawo yokugqibela yelizwe ukuze uqhubeke usiya kwinjongo; Akunyanzelekanga ukuba uqale ekuqaleni, nangona oku sele kukhetho lwakho, njengoko ungaziqokelela ukuze uzichithe xa kufanelekile.
Inemowudi ezininzi zomdlalo kunye nemowudi yebali, yeyiphi eyona iphambili kunye naleyo igcwele amanqanaba amaninzi anzima. Ewe kunjalo, ekuqaleni zihlala zilula, kodwa musa ukuthabatheka yiyo; Emva koko, kufuneka uphucule kakhulu ukuze ungoyiswa ngokulula, kwaye ngcono, ufumane isihloko seyona ninja ilungileyo kwihlabathi.
Imizobo imnyama kwaye ilula ngandlela ithile, kodwa ngokugqwesileyo. Ngaphandle kwamathandabuzo, lo mdlalo uyinto emnandi yamehlo, nakwindlebe, njengoko inengoma ekuntywilisela ngokupheleleyo kumdlalo.
Umthuthukisi: Imidlalo ye-TOH
I-Ninja Turtles: Iintsomi
Ekudityanisweni kweyona midlalo mihle ye-ninja ye-Android awukwazi, nokuba ingoyena mkhulu ehlabathini, enye yeeturkey ze-ninja, abalinganiswa behlabathi le-ninja kwiikomikhi, iikhathuni, imidlalo kunye nemisebenzi engapheliyo yokubhala eyaqala kwiminyaka eyi-80 .
Umkhosi wezinto eziguqulwe ngumsindo ezinezicwangciso ezinobundlobongela ezikhokelwa Ophakamileyo uKraang, umphathi womdlalo, ekufuneka uLeonardo ajongane nayo phantsi kwemiyalelo kunye namandla akho. Umbono weSupreme Kraang kukwenza umhlaba kwiDimension X, kwaye ngenxa yoku uthimbe abantakwaboLeonardo kunye nazo zonke iintlobo zezinto eziguqukayo emhlabeni kwiDNA yabo, abathathwa ngenkani baya kwiXesha X.
Kukho izahluko ezi-7 nangaphezulu kwamanqanaba angama-70 kunye nehlabathi omele ukoyisa ukufikelela esiphelweni., kodwa hayi ngaphambi kokuba woyise bonke abaphathi abakunqamlezayo. Kukho ii-lackeys eziya kuzama ukwenza ukuba usilele kwinjongo yakho yokubuyisela yonke into kwesiqhelo kunye nokufumana kwakhona ezinye iimfudu ze-ninja kunye nazo zonke izinto eziguqukileyo ebezivalelwe.
Kukho uninzi lwabalinganiswa onokuthi udlale kwaye ulwe nabo. Kananjalo uneendlela ezininzi zokulwa ekufuneka uzenze ukuze uqhubele phambili kwinqanaba elilandelayo., kuba utshaba ngalunye olutsha oluvela kwimbali lomelele kunolo langaphambili. Ukuphucula ukuqonda kwakho, ukulwa kunye nezakhono zokulwa kwaye ube yimpumelelo ninja ufudo. Unako ukuphucula kunye nayo yonke imbuyekezo yemihla ngemihla kunye namabhaso onokuwaqokelela rhoqo. zisebenzise ukwenza umdlalo ukonwabisa ngakumbi.
Njengoko unokulindela, lo mdlalo unemizobo eyenziwe kakuhle kunye noopopayi kunye nesandi esingenakuthelekiswa nanto. Akukho nto ngeeNinja Turtles: Amabali yenye yezona zinto zikhutshelweyo kunye nezihloniphekileyo kwiVenkile yokuDlala ye-Android.
Umthuthukisi: ILudia Inc.
I-Ninja Dash Run-Imidlalo emitsha ka-2021
I-Ninja Dash Run ngumdlalo we-ninja arcade ukukhawuleza nokulahlaNgokucacileyo, oya kuthi uphulukane neeyure kunye neeyure kukonwaba okuqhubekayo okuntywiliselwe kwiindawo ezahlukeneyo zoopopayi, iigraphics, iziphumo kunye nesandi esimangalisayo. Phambili kwihlabathi, ukutsiba kunye nokulwa neentshaba (iidemon, iidemon kunye nabaphathi be-epic), ucofa apha naphaya, kwaye ungqine ukuba ungoyena ninja ubalaseleyo emhlabeni.
Fumana iingqekembe kunye nembuyekezo, kunye namabhaso awahlukeneyo anomdla aya kukutsalela kumdlalo. Ukuphucula izakhono zakho kunye nomlingiswa wakho, ukuze angoyiseki. Nawe unayo Iimpawu ezi-8 ezahlukeneyo, nganye inamazinga ama-epic aya eba nzima njengoko uqhubeka ngomdlalo. Ngokulandelayo, unokwenza ii-combos ezinamandla, ukwenza uhlaselo olungenakuthelekiswa nanto. Unabalinganiswa abaninzi abanjengoSenji, Shiro, Tetsu, Kira, Bonzu, Hana noAkane. Ukongeza, unokukhetha kwizixhobo ezahlukeneyo kubandakanya ukusetyenziswa kweekatanas, izinti, iishurikens, kunye nokunye.
Inkolelo kaNinja: Umdlalo wokudubula we-3D Sniper
Ukuba ujonga umdlalo we-ninja ngemizobo ye-3D, kuya kufuneka uzame, ewe okanye ewe, uNinja's Creed: 3D Sniper Shooting Assassin Game. Kwaye kunjalo esi sihloko asithathwa njengenye yezona zilungileyo zohlobo lwaso; akukho nto ingako kwaye akukho nto ingaphantsi, kwiVenkile yokuDlala ine-10 yezigidi ezikhutshelweyo kwaye phantse i-300 lamawaka amanqaku amahle kunye nezimvo eziyinika amanqaku okugqibela kwivenkile yeenkwenkwezi ze-4.4. Ewe asijonganga nomdlalo okhanyayo, kodwa omnye umalunga ne-150 MB, kodwa oku kungenxa yokuba umgangatho weopopayi, amabali kunye nokunye kulungile kakhulu.
Kulo mdlalo unendawo yokulinda apho ungakhetha khona iindlela ezahlukeneyo zomdlalo onawo. Kwangelo xesha, ayisiyiyo umdlalo we-ninja oqhelekileyo ekulweni nawo. Apha umbono kukutsiba ngokwaneleyo ukusuka kwiindawo eziphakamileyo nakwiindawo ezikudeUkugqiba iithagethi ngezixhobo ezahlukeneyo ezibandakanya ukusetyenziswa kweeminqamlezo kunye nezakhono ezininzi. Soloko uzama ukubetha ekujolise kuko, kodwa ngaphezulu koko, zama ukuhambisa iintloko ezibulalayo. Unako kwakhona ukuphucula abalinganiswa kunye nezixhobo, ukonyusa amaxabiso anje ngomonakalo, ukuzinza, ukulayisha kwakhona ixesha, ukuchaneka kunye nenjongo.
Ukuba uphose ifoto, ungabanjwa, ke zama ukungayenzi kwaye uchaneke ngalo lonke ixesha. Kubalulekile ukuzaliseka kwemishini kunye nokuqhubela phambili kwimowudi yebali lomdlalo, kunye nokusinda, njengoko iintshaba zinokuzama ukukubulala ukuba ucacile.
Umthuthukisi: I-707 INDLELA YOKUZIPHATHA: Imidlalo yokuzijabulisa eqhelekileyo
Kuya kulunga ukuba ungagqibi ukudityaniswa kweShadow Fight 2. Ngoba? Ewe, umbuzo kulula ukuwuphendula, kwaye kukuba lo mdlalo wee-ninjas kunye nemilo, mhlawumbi, kwaye kude kube, yeyona nto ikhutshelweyo kwaye idlalwe kwii-mobiles ze-Android, kwaye sibubona ubungqina boku kwiirekhodi zeVenkile yokudlala; Inokukhutshelwa okungaphezulu kwesigidi se-100, kunye nokulinganiswa okuhle kunye neembono eziphantse zibe zizigidi ezili-15, ukuyinika amanqaku okugcina asesitolo eenkwenkwezi ezi-4.6, uphawu oluhloniphekileyo.
Ngoku, Ngumdlalo apho ungasebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zokulwa ngokusondeleyo. Ewe unokuba yi-ninja kuyo, kwaye ngenxa yoko uneendlela ezikhethekileyo nezibulalayo kunye nezixhobo.
Iziganeko eziphindaphindayo ziphinda iindawo ezimnyama nezimnyama, nomoya waseAsia kunye noopopayi abafezekiswe kakuhle. Yintoni egqithisile, iintshukumo zabalinganiswa zisebenza ngokugqwesileyo, kuba ezi, ngaxeshanye, zinamanzi kakhulu kwaye ziyinyani kangangoko kunokwenzeka. Alithandabuzeki elokuba umsebenzi woopopayi, kunye nemizobo yeShadow Figth 2 inomona, kwaye sesinye sezizathu zokuba kutheni ithandwa kangaka.
Ngakolunye uhlangothi, Kukho imihlaba emithandathu eyahlukeneyo ezele ziidemon kunye nezilo eziyingozi, ekufuneka woyise njengoko ibali lomdlalo lokuntywilisela liqhubeka. Yiba yi-ninja enobuchule kunye nomlo kwaye ubonise ukuba unokulwa nabani na.
Umthuthukisi: I-Nekki-iMidlalo yokulwa nokulwa
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Iimidlalo ezi-5 ezilungileyo ze-ninja ze-Android
Kutheni ndingenakukhuphela iiapps